Akira: Fampiharana open source Linux fampiharana ho an'ny endrika UI sy UX | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 25/09/2021 06:00 | fampiharana, GNU / Linux
Amin'ny faritry ny famolavolana sy fandaharana, misy ny atao hoe UX (Experience'ny mpampiasa) y UI (Interface an'ny mpampiasa). Ary na dia samy manana anarana mitovy aza ireo teny roa ireo dia samy hafa tanteraka izy ireo. Satria, raha ny voalohany dia manondro ny traikefa sy fahatsapana ho an'ny mpampiasa, ny iray kosa dia mankany amin'ny lafiny mitombina kokoa an'ny fitetezana / fikarohana momba ny noforonina.
Ary azo antoka, maro amin'ireo fitaovana tsara indrindra ho an'ny UX / UI ny tsy miankina sy ara-barotra, saingy tsy midika izany fa tsy misy ny lehibe fampiharana maimaimpoana, misokatra na maimaim-poana misy. Toy ny tranga ny Akira.
Ahoana ny fomba hamoronana Multimedia Distro amin'ny GNU / Linux
Ho an'ireo liana amin'ny fikarohana ny sasany amin'ny anay Lahatsoratra mifandraika miaraka amin'ny lohahevitry ny fampiharana Multimedia, azonao atao ny manindry ity rohy manaraka ity, rehefa avy namaky ity famoahana ity izao:
"Na dia misy aza ny sasany amin'ireo programa tsara indrindra amin'ny fanitsiana sy famolavolana Multimedia (Lahatsary, Feo, Mozika, Sary ary sarimiaina 2D / 3D) dia fananana sy karama ary hita ho an'ny Operating Systems amin'ny karazany mitovy ihany, amin'izao fotoana izao ny GNU Applications Ecosystem / Linux dia manana lisitry ny fampiharana be dia be sy tsara ho an'ny Multimedia Editing and Design." Avadiho ho lasa Multimedia Distro ny GNU / Linux anao
1 Akira: Multiplatform App natsangana niaraka tamin'i Vala sy GTK
1.1 Inona no atao hoe Akira?
1.3 Fampidinana, fametrahana ary fampiasana
Akira: Multiplatform App natsangana niaraka tamin'i Vala sy GTK
Inona no atao hoe Akira?
Ao aminy tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, hoy ny fangatahana dia faritana fohifohy toy izao:
"Fampiharana Linux tompon-tany ho an'ny endrika UI sy UX natsangana tamin'ny Vala sy GTK."
Mandritra izany fotoana izany dia ampian'izy ireo ity manaraka ity:
"Akira dia rindrambaiko famolavolana Linux teratany namboarina tao Vala sy GTK. Akira dia mifantoka amin'ny fanolorana fomba maoderina sy haingana amin'ny UI sy UX Design, izay mikendry indrindra ireo mpamorona tranonkala sy mpamorona sary. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny manolotra vahaolana marim-pototra sy matihanina ho an'ireo mpamorona izay te hampiasa Linux ho rafitra fiasan'izy ireo. AKIRA dia eo am-pamolavolana voalohany, TSY Vonona hampiasaina hamokarana! Aza misalasala misintona ny Alfa ary manampy anay hitsapa azy."
Anisany Endri-javatra 10 miavaka indrindra ity manaraka ity dia azo tononina:
Manome canvas vector feno hanovana habe tsy misy fetra nefa tsy hahavery kalitao.
Ahitana tontonana safidy hendry izay mampiseho ny toetra azo ovaina amin'ny singa voafantina.
Izy io dia misy takelaka sosona manana fahaizana misintona sy milatsaka ary mandamina azy ireo am-pahalalana.
Mamorona rakipeo handamina tsara kokoa ny famerenana sy ny fomba fijery famolavolana.
Manome fifehezana ny habe sy ny kalitaon'ny sary aondrana
Ahitana andiana sary masina azo ovaina.
Ahitana fanarenana tanteraka ny maritrano famakiam-boky Canvas.
Izy io dia manana fampiharana ny grid pixel.
Manome fanaingoana ny lokon'ny piksela pixel.
Manolotra ny fampiharana ny tari-dàlana ho an'ny smart fit.
Azo atao izany mametraka, mihazakazaka ary esory mampiasa ny Snap manager manager, toy izao manaraka izao:
Azonao atao ihany koa mametraka, mihazakazaka ary esory mampiasa ny Mpitantana fonosana Flatpak, toy izao manaraka izao:
Anisan'ireo tsara indrindra safidy maimaim-poana, misokatra ary maimaim-poana a Akira azontsika atao ny manonona ireto manaraka 10 ireto:
Raha tsorina Akira dia fampiharana famolavolana cross-platform an'ny UI sy UX loharanom-baovao malalaka sy misokatra. Izay voasoratra ao Vala sy GTK, ary navotsotra teo ambanin'ny Lisansa GNU ankapobeny ho an'ny daholobe v3.0. Ary vokatr'izany dia fitaovana ilaina sy maimaimpoana ho an'ny mpamorona tranonkala sy mpamorona sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Akira: Fampiharana Linux loharano misokatra ho an'ny famolavolana UI sy UX
Diego Vallejo placeholder sary dia hoy izy:
Fampiharana "misokatra" iray hafa hisintonana azy ireo ka hanaikitra bebe kokoa amin'ity aberration parcel ity.
Valiny tamin'i Diego Vallejo
Miarahaba, Diego. Misaotra tamin'ny hevitrao. Manantena izahay fa, rehefa mihatsara i Akira, dia ho tonga amina endrika fonosana tsara kokoa ho an'ny GNU / Linux.